Cadaadiska High Micro Oil Air hawadda ee CMN / G taxane - Shiinaha Zhejiang Jieneng
Cadaadiska High Micro Oil Air hawadda ee CMN / G taxane
CMN ayaa marka hore la bilaabay laba stage fur hal kombaresarada hawada la gariirka yar yahay, buuq yar, baxsiga yar, oolnimada sare, iyo wax soo saarka hawada ka badan. Laba stage fur hal kombaresarada hawada ee CMN samayn qayb in industry ee caalamka kombaresarada hawada cadaadiska dhexdhexaad ah iyo waxa la isticmaalo in wax soo saarka warshadaha iyo xarumaha difaaca military. beegyada uu Technical cadaadis sare kombaresarada hawada saliid micro of CMN / G Model taxane qaab cadaadis shaqada Air Supply camal ...
CMN ayaa marka hore la bilaabay laba stage fur hal kombaresarada hawada la gariirka yar yahay, buuq yar, baxsiga yar, oolnimada sare, iyo wax soo saarka hawada ka badan.
Laba stage fur hal kombaresarada hawada ee CMN samayn qayb in industry ee caalamka kombaresarada hawada cadaadiska dhexdhexaad ah iyo waxa la isticmaalo in wax soo saarka warshadaha iyo xarumaha difaaca military.
beegyada uu Technical cadaadis sare kombaresarada hawada saliid micro of CMN / G taxane
L * * W H
* 2340 2200 * 1900
3200× 1850 × 2190
4.9 ~ 12.3
2340 * 2200 * 1900
Notes: Shirkadda xaq u leedahay inay sii wadaan horumarinta technology, isbedel kasta oo xogta loo sheegi doonaa ka hor.
Previous: CM / G Taxanaha saliid preseeure dhexdhexaad fur free kombaresarada hawada
Next: shuruudaha gaarka ah oo fur gaaska habka hawadda hawada
Cadaadiska High Air kombaresarada Oilless
Cadaadiska Hoose Oo Oilless Air kombaresarada
Cadaadiska Dhexdhexaad Air kombaresarada Oilless
Oil-yar Air kombaresarada Waayo Dhalo Machine u babanaya
Oil-yar Air kombaresarada Waayo Dhalo Makiinado Making
Oil-yar Air kombaresarada Cunto Makiinado
Oil-yar Air kombaresarada Waayo, Warshadaha Pharmaceutical
Oil-yar Air kombaresarada Waayo Machine Gurdanka
Oil-yar Air kombaresarada kulan Waayo Chamber ogsijiin Hyperbaric
Hospital Waayo Special Oil-yar Air kombaresarada
Oil-yar Air kombaresarada Gaarka Waayo Codsiga Medical
Oil-yar Air kombaresarada Taageeridda Waayo Industry Electronic
Oilless Air kombaresarada
Oilless Air kombaresarada Waayo Bus Oo Truck